गर्भावस्था को समयमा दुखेको बायाँ तर्फ कसरी खतरनाक यो छ
गर्भवती महिला एक बच्चा लागि प्रतीक्षा सधैं आफ्नो स्वास्थ्य र, फलस्वरूप, बच्चा को स्वास्थ्य संग सम्बन्धित केही फिक्री महसुस। गर्भावस्था को समयमा आफ्नो बायाँ तर्फ दुख्छ कि अचानक अनुभूति, यो तपाईंको पहिलो गर्भावस्था छ विशेष गरी भने, जवान आमा सचेत हुनुपर्छ। शरीर मा हर्मोन चर्किरहेको यो समयमा, यो गर्भावस्था र प्रसब लागि तयार थियो physiologically गर्न उलटफेर। तर कहिले काँही पेट दुखाइ - एक संकेत आपतकालीन उपाय लिन गर्न।
भावना फरक हुन सक्छ
दुखाइ मा अक्सर हुन्छ प्रारम्भिक गर्भावस्था, र यो सबै आन्तरिक अङ्गहरू को पुनर्गठन को फलस्वरूप हुन्छ। त्यसैले गर्दा पहिलो trimester मा गर्भावस्था को समयमा दुखेको बायाँ तर्फ, यो एउटा सरल बेचैनी रूपमा कथित गर्न सकिन्छ। एकै समयमा, लक्षण स्वास्थ्य सम्बन्धित विभिन्न समस्याहरू बारे कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं स्वास्थ्य जवान आमा वा बच्चा गर्न वास्तवमा खतरा लक्षण को सरल असहज महसूस बीच भेद गर्न सक्षम हुनुपर्छ।
तपाईं संग भइरहेको परिवर्तन गर्न राम्ररी सुन्न
1 जब एक पेट दुख्यो, गर्भावस्था को समयमा बायाँ तर्फ खींच भने, तपाईं गर्भावस्था को कुनै दुई भन्दा बढी महिना गर्नेहरूलाई महिलाहरु चिन्ता हुँदैन र माथि उनको पीडादायी अवधि गर्न साधारण थिए। फैलयो पेट समर्थन बंधन, को गर्भाशय आन्तरिक अङ्गहरू मा दबाव हाल्छ, त्यसैले गर्भावस्था को प्रारम्भिक अवधि मा बेचैनी भयानक छैन, यदि पहिलो trimester अन्त द्वारा सानो दुखाइ पास। त्यसपछि, यो भुँडी समर्थन गर्न पट्टी किन्न थप expedient छ। यो गर्भावस्था को समयमा आफ्नो बायाँ तर्फ दुख्छ कि भावना को छुटकारा प्राप्त गर्न मदत गर्नेछ।
2. बढ्दै भ्रूण को intestines को दिशा मा उत्प्रेरित गर्छ गर्दा गर्भावस्था को समयमा आफ्नो बायाँ तर्फ दुख्छ कि एक भावना, को विस्थापन ठीक सही छ रूपमा वृद्धि हुन सक्छ। आफ्नो लंच र डिनर unevenly को bowels मार्फत प्रबन्ध गर्न सकिन्छ। साथै, हर्मोन मांसपेशीमा को विश्राम मा "काम" छन्। त्यहाँ, कब्जियत हुन सक्छ त सुनिंनु को intestines मा Peristalsis अलिकति कम, र फलस्वरूप, आफ्नो बायाँ तर्फ दुख्छ। गर्भावस्था को समयमा यो दुखाइ को प्रकृति ध्यान महत्त्वपूर्ण छ। यो लक्षण हल्का वा गंभीर हो कि छ।
3. पनि दुखाइ चिकित्सकहरु को तत्काल हस्तक्षेप बिना गर्भावस्था को कुनै पनि मंच मा रक्तस्राव को कुनै पनि फारम लागि आवश्यक छ।
जब एक गर्भवती पेट "ठिक" हुन सक्छ?
"तीव्र" भुँडी को संकेत एक एम्बुलेन्स कल गर्न एक महिला एक गर्भावस्था छ जब समय मा जान्नु आवश्यक छ। बायाँ तर्फ दुखाइ रोगहरु को एकदम ठूलो समूह कारण हुन सक्छ। तिनीहरूले डाक्टर को अनिवार्य हस्तक्षेप आवश्यक सामान्य सुविधाहरू साझेदारी गर्न सक्छन्। "तीव्र" भुँडी को मुख्य संकेत:
त्यहाँ एक तेज दुखाइ, कुनै कुरा जहाँ यो स्थित छ। यो रूपमा गंभीर र दुखाइ वृद्धि हुन सक्छ।
जब पेट मांसपेशीमा तनाव को अगाडि भित्तामा (को भुँडी वरिपरि वा प्रतिबन्धित क्षेत्र मा)।
जब एक causeless वाकवाकी वा उल्टी, गंभीर सुनिंनु, ढिला शिपमेन्टहरू।
दबाब कम छ भने, अचेत अवस्थामा महिला, छन् एक चिसो पसिना र फीकापन।
त्यहाँ तापमान र मा वृद्धि छ बारम्बार छिटो धडकन। यो पनि डाक्टर कल गर्न एउटा कारण छ।
आतंक छैन, तर अधिकतम ध्यान देखाए
गर्भवती महिला मा पेट दुखाइ को कारण विशेष तीव्र छ, कारण विभिन्न हुन सक्छ र त्यहाँ उपेक्षा गर्न भन्दा सुरक्षित हुन राम्रो छ, त्यसैले यसलाई तीव्र दुखाइ को मामला मा एक डाक्टर हेर्न आवश्यक छ। preeclampsia - दुखाइ को कारण मात्र गर्भावस्था को समयमा हुन्छ एक विकृति बन्न सक्छ। त्यहाँ पेट, गंभीर टाउको दुखाइ माथि दुखाइ हो भने, आँखा, उच्च रक्तचाप, र "मक्खी" मांसपेशी twitching अनुहार - आफ्नो चिकित्सा टोली कल।
"पहिलो सहायता" आउनुअघि के गर्न? सबै एक गर्भवती महिला सकेसम्म राम्रो महसुस गर्न लागि अवस्था सिर्जना गर्नुहोस्। पर्दे आकर्षित वा उज्ज्वल प्रकाश बुझाने, हल्ला छैन, एक्लै हुन एक महिला प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। त्यो कुनै पनि cramping छैन भन्ने सुनिश्चित गर्न नजिकबाट हेर्नुहोस्। उनको घटना को मामला मा तत्परता मा निकै रोगी रोक्न दाँत संकुचन गर्न एक तौलिया मा र्याप एक चम्चा राख्नुहोस्। टाउको उठाएको हुनुपर्छ। आफ्नो डाक्टर चिकित्सा आदेश गरेको छ भने, तपाईं तिनीहरूलाई लिनुपर्छ। Preeclampsia अस्पताल उपचार आवश्यक छ।
गर्भावस्था मा रक्तचाप कसरी कम गर्न। गर्भावस्था मा दबाव कम कि औषध
गर्भावस्थाको बेला कसरी खाने? गर्भावस्थाको 9ौं महिनामा पोषण
कम्पनी ODO "व्यापार शहर": को कर्मचारी, सुविधा र सेवा बारे टिप्पणी
खरायो मा Coccidiosis: उपचार, लक्षण, रोकथाम, रोग को लक्षण
होटल4* सूर्यास्त बीच Resort, फुकेत, थाईल्याण्ड: तस्बिर र समीक्षा
का एक गोही देखि एक गोही भिन्नता बुझ्न गरौं